Soo -saareyaasha shaaha madow - Shiinaha Warshadda shaaha madow & alaab -qeybiyeyaasha
Shaaha madow ee Zhenghe Gongfu waa mid ka mid ah saddexda shaaha madow ee Gongfu ee ku yaal Gobolka Fujian (Zhenghe, Tanyang, Bailin), sidoo kale waa shaaha xarriiqda ugu tayada badan ee Gobolka Shandong oo ka mid ah shaaha madow ee Fujian. Shaaha Zhenghe Kungfu waa nooc ka mid ah shaaha baarka oo leh astaamaha ugu sarreeya ee shaaha buurta sare ee shaaha madow ee Fujian. Wax -soo -saarku wuxuu leeyahay taariikh ka badan 200 oo sano.
Lapsang Souchong Shaaha Madow Harney & Wiilasha Shaah Fiican
Lapsang Souchong, oo sidoo kale loo yaqaan Lapushan Souchong, wuxuu ka tirsan yahay qaybta shaaha madow waxaana si wada jir ah loogu yeeraa Souchong shaaha madow oo leh jinsiyado macmal ah. Waxaa markii hore laga abuuray aagga Tongmu ee Gobolka Chong'an, Gobolka Fujian (Chong'an waxaa laga saaray gobolka 1989 -kii waxaana loo beddelay Magaalada Wuyishan). Waa shaaha madow ee ugu horreeyey adduunka, oo sidoo kale loo yaqaanno curiyaha shaaha madow. Waxay leedahay taariikh ka badan 400 oo sano. Waxaa abuuray beeralayda shaaha ee maxalliga ah oo ku qotoma buurta Wuyi ee Fujian badhtamihii ilaa dabayaaqadii Ming Dynasty.
Yongchuan Xiuya waa shaah caan ku ah cirbadda, oo ka tirsan qaybta shaaha cagaaran. Waxaa soo saaray oo soo saaray Machadka Cilmi -baarista Shaaha ee Akadeemiyadda Chongqing ee Cilmiga Beeraha 1959. Sannadkii 1964 -kii, waxaa si rasmi ah loogu magacaabay Yongchuan Xiuya khabiirka caanka ah ee shaaha gudaha, Professor Chen Lun.
Hordhac kooban oo ah shaaha madow ee Yingde Shaaha madow Yingde, oo ah takhasus u leh Magaalada Yingde, Gobolka Guangdong, waa wax soo saarka Tusaha Juqraafiyeedka Qaranka ee Shiinaha. Warshadaha shaaha casriga ah ee Yingde waxay bilaabantay 1955-kii, markii warshaddii shaaha ee caanka ahayd ee kala duwan-Yunnan Dayezhongcha si tijaabo ah loo soo saaray; 1959, shaaha madow ee Yingde ayaa si guul leh loogu tijaabiyey Yunnan Dayezhongcha. Tan iyo markii la aasaasay, shaaha madow ee Yingde waxaa loo yaqaanay saddexda shaah ee madow ee ugu waaweyn Shiinaha, oo ay weheliyaan Yunnan Dianhong iyo Anhui Qihong, oo loogu talagalay muuqaalkeeda isku -habboonaanta iyo quruxda badan, midab madow iyo midab leh, midab maraq cas iyo dhalaalaya, iyo caraf hodan ah oo saafi ah .
Shaaha Madow Jumlada 100% Caafimaadka Dabiiciga ah Yixing Shaaha Madow
Yixing shaaha madow, oo lagu soo saaray Yixing, Jiangsu, waa in lagu tilmaamaa "Su Hong" qaybta shaaha. Aagga shaaha laga soo saaro waxaa iska leh Buuraha Tianmu. Shaaha waxaa lagu gartaa qaab adag oo isku xidhan iyo midab madow. Ma jiro wax lagu kala saaro Yixing shaaha madow laftiisa. Gudaha Yixing, waxaa kaliya lagu kala saari karaa shaah caleen, shaah jaban, shaah la jarjaray, iyo shaah aan shay ku dhisnayn oo ku salaysan qaabka shaaha.
Shaaha Shiinaha ee Shaaha Shaaha Madow ee Tan Yang Kungfu
Waa mid ka mid ah saddexda shaaha madow ee ugu waaweyn Gongfu ee Gobolka Fujian. Sida laga soo xigtay halyeeyga, waxaa si tijaabo ah u soo saaray dadka Tanyang Tanyang, Fu'an City intii lagu jiray sanadihii Xianfeng iyo Tongzhi ee Boqortooyadii Qing. Waxaa laga joogaa in ka badan 100 sano tan iyo markaas.
Magacyada sharafta leh: “King Shaaha”, “Abaalmarinta Shaaha ee Caanka ah”, iwm.
Fu'an “Tanyang Gongfu” shaaha madow waa kan ugu horreeya saddexda shaaha madow ee Gongfu ee Fujian. Waxaa laga sameeyaa burooyinkeeda iyo caleemaha geedka shaaha Tanyangcai ee heer sare ah sida alaabta ceeriin. .
Qimen Black Tea Premium Qi Hong Jinzhen 2021 Shaah Cusub
Qi Hong Jinzhen waa shaaha madow ee caanka ah ee Gongfu ee dalkeyga, waa hanti shaaha madow ee dhaqanka Gongfu, oo leh taariikh wax soo saar oo ka badan boqol sano. Qaabku wuxuu u eg yahay cirbadaha iyo sunniyaha, sida sunnayaasha geedka willowga ee gabdhaha, oo dhagan oo dhuuban, midabkiisu waa mugdi iyo dhalaalaya, timaha dahabka ahna waxay muujinayaan midab dahab ah. Waxay leedahay caraf cad oo orchids ah. Sababtoo ah waxay u egtahay sunnayaasha shafka ee gabadha, dadka qaarkood waxay ugu yeeraan sunnooyinka Qi.
Jiuquhongmei waxaa loogu yeeraa "Jiuquhong", oo ah shey kale oo weyn oo feedh dhaqameed ah oo ku yaal Degmada Xihu iyo hanti ka dhexaysa shaaha madow. Udgoonku wuxuu leeyahay caraf udgoon macaan oo udgoon leh iyo caraf udgoon, maraqa shaaha waa macaan oo jilicsan, wuxuu leeyahay dhumuc gaar ah, wuxuu leeyahay cuncun yar oo afka ah, wuxuuna leeyahay astringency yar. Cabbidda ka dib, afku waa iska qabow. Cusub oo qurux badan, sida inaad aragto naag Jiangnan macaan ah.
Shaaha Dianhong Gongfu wuxuu ka tirsan yahay qaybta shaaha madow. Isaga iyo Dianhong shaaha madow ee la jajabiyey ayaa inta badan lagu iibiyaa waddamada Bariga Yurub sida Ruushka iyo Poland, iyo sidoo kale in ka badan 30 dal iyo gobollada Galbeedka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Waxaa lagu iibiyaa gudaha gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalka. Cabitaannada Dianhong ayaa inta badan lagu qaso sonkor iyo caano, udugga iyo dhadhanka ka dib marka lagu daro caanaha ayaa weli xooggan. Shaaha Dianhong Gongfu waa shaah si buuxda loo qooyay oo leh dabeecad diiran. Cabbitaanku ma kicin doono caloosha waxayna u fiican tahay jirka.
Bai Lin Gong Fu Hong Cha Shaa oo ay leedahay ShiinahaTea
Xirfadaha shaaha ee Bailin Gongfu ayaa hoos loo dhigay in ka badan 250 sano. Waxaa mar lagu taxay "Saddexda Shaaha Madow ee Gongfu ee Minhong" oo ay weheliso Tanyang Gongfu Shaaha iyo Shaaha Zhenghe Gongfu. Shaaha Bailin Gongfu wuxuu caawin karaa dheefshiidka caloosha, wuxuu kor u qaadaa rabitaanka cuntada, diuresis wuxuuna baabi'iyaa bararka. Waxay ku raaxaysataa sumcad sare gudaha iyo dibaddaba xirfadaha gacanta lagu sameeyay ee aadka u fiican iyo tayo gaar ah oo aad u fiican. Waa dhaxal dhaqameed aad u qiimo badan oo aan la taaban karin taariikhda Fuding.